I-Favicon Generator: Ungayenza Kanjani i-Favicon
NgoMgqibelo, Okthoba 11, 2008 NgoLwesine, Juni 25, 2015 Douglas Karr
Lokhu kungabonakala njengokuncane, kepha ngaso sonke isikhathi lapho ngifika kusayithi elihle futhi kungekho sithonjana esihambelana naso esiboniswa kusiphequluli, ngiyazibuza ukuthi kungani umsebenzi ungakaqedwa. Kuyavunywa, i-favicon yami akuyona leyo emangazayo… bengifuna nje ukuthola okuthile okuhlukanise isiza sami kwabanye:
Ukusetha Okuyisisekelo Kwe-Favicon
Uma ungasethanga i-favicon yewebhusayithi yakho, ilula ngendlela emangalisayo. Indlela elula ukulahla ifayela lesithonjana elibiziwe favicon.ico enkombeni yezimpande yewebhusayithi yakho. Bekujwayele ukuthatha izinhlelo zesithonjana njenge Microangelo (uhlelo lokusebenza olukhulu lokuthuthukisa isithonjana) kepha kukhona okuhle amanye amathuluzi wokudala isithonjana online!
Mane ulayishe noma yiliphi ifayela lesithombe kuDynamic Drive, ukhiphe lelo fayela, bese uliphonsa enkombeni yakho yezimpande. Zonke iziphequluli zesimanje zizobheka futhi zibonise lesi sithonjana kubha yekheli.
Ukusetha Okuthuthukile kwe-Favicon
Uma ungathanda ukuqinisa isiza sakho futhi uthuthukise kahle isithonjana osithandayo, kukhona iheda ethile ye-HTML ongayifaka.
Uma usebenzisa i-WordPress, ungangeza leyo khodi ku-header.php yesifanekiso sakho kufayela le- ingxenye.
Tags: i-favicon egqwayiziwe-faviconi-favicon generator
Okthoba 12, 2008 ngo-8: 46 AM
Iseluleko esihle, uDoug. Bekufanele ngengeze ngokushesha imilingo kuwebhusayithi yethu 😉
http://abitofmagic.no/english - manje enefavicon egqwayiziwe.
Okthoba 12, 2008 ngo-11: 22 AM
I-gif epholile kakhulu! Kuhle!
Okthoba 12, 2008 ngo-9: 35 AM
Ukwakha i-favicon empeleni bekungezinye zezidingo zokuklama kabusha iwebhusayithi yami. Ngangiphikelela.
Okthoba 12, 2008 ngo-11: 23 AM
Ngicabanga ukuthi kufanele kube kusayithi lawo wonke umuntu, uPatric. Ngisebenze nomdwebi wezithombe okhethekile ekwakhiweni kwezithonjana futhi kubuciko impela, futhi!
I-Oct 2, i-2012 ku-7: i-46 PM
Ngisasebenzisa iMichelangelo. Uma ngabe ubungazi, ungashumeka osayizi abaningi ku-favicon ngakho-ke UMA othile ehudulela kudeskithophu (noma efanayo) awunamathele enguqulweni engu-16 × 16.
I-Oct 2, i-2012 ku-8: i-20 PM
Bekufanele ngabe ngathi, ngencazelo ifayela lesithonjana iqoqo lezithombe ezahlukahlukene zosayizi. Umkhiqizi weFavicon uzokwakha izingqimba eziningi!